Erdogan oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaErdogan oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Erdogan oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
February 9, 2017 Abdi Omar Bile Somalia 0
Erdogan oo u hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayip Erdogan ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii uu taleefoon kula hadlay gelinkii dambe ee xalay oo Arbaco ahayd, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga Anadolu oo soo xigatay saarkiil katirsan madaxtooyada Turkiga.
Sanadihii u dambeeyay, Turkiga ayaa kaalin weyn oo muuqata ka qaatay xasiloonida iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya.
March 17, 2017 Turkiga oo saldhigiisa milatari ee gudaha Soomaaliya furi doona bartamaha bisha April ee sanadkan
Haayada IMF oo sheegtay in dakhliga wax-soosaarka Soomaaliya uu hoos u dhici doono 2.7 boqolkiiba inta lagu jiro 2017
Xildhibaano katirsan aqalka sare oo kasoo jeeda Puntland oo Garoowe u yimid wadatashi
Garowe-(Puntland Mirror) Xildhibaano katirsan aqalka sare oo kasoo jeeda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah yimid magaalada Garoowe, ee caasimada Puntland. Xildhibaanada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedka safarkooda Garoowe uu yahay sidii [...]
Kooxda argagixisada ah ee Booko Xaaraam oo ka dagaalanta dalka Nayjeeriya ayaa samaysatay idaacad FM ah oo mawjadeedu tahay 96.8, sida ay sheegtay laanta Xawsaha ee idaacada VOA. Sida ay wararku sheegayaan, dadka ku nool [...]